विराट र अनुष्कालाई छोरीको नाम यस्तो राख्नु भन्दै विश्वभरका फ्यानले पठाए नाम, कुनै यस्ता अनौठा नाम पनि छन् – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/विराट र अनुष्कालाई छोरीको नाम यस्तो राख्नु भन्दै विश्वभरका फ्यानले पठाए नाम, कुनै यस्ता अनौठा नाम पनि छन्
एजेन्सी । भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान विराट कोहलीकी पत्नी अनुष्का शर्माले सोमबार छोरीलाई जन्म दिएकी छन् । अनुष्का शर्माले एक प्यारी सानी छोरीलाई जन्म दिएको खबर फैलिएसंगै छोरीको नामका बारेमा पनि चर्चा सुरु भएको छ । विराट कोहलीले सोशल मीडियामा पोस्ट गरेर फ्यानहरूलाई त्यसबारे जानकारी दिएपछि नामका बारेमा अनुमान लगाउन सुरु भएको छ ।
विराटको बुबा बनेको खबर द्रुत रूपमा फैलियो र यसका साथ सोशल मीडियामा छलफल सुरु भयो कि अनुष्काकी छोरीको नाम के हुनेछ ? प्रशंसकहरूले यसको बारेमा अनुमान लगाउन थालेका छन्।
एक जना प्रयोगकर्ताले ट्विटरमा लेखे कि विराट-अनुष्काकी छोरीको नाम सिड्नी हुनेछ ? अर्को अनुमान लगाए कि उसको नाम इरश्का हुनुपर्दछ।
त्यस्तै अर्को फ्यानले नाम सुझाव दिए, प्रिय राजा, तपाईलाई र अनुष्कालाई हार्दिक बधाई, साथै तपाई आफ्नो प्यारी बच्चाको लागि सिड्नीमा खेलेको यादगार चौथो टेस्ट म्याचको लागि तपाई अश्वा नाम राख्न सक्नुहुनेछ ।
एक प्रयोगकर्ताले विराट अनुष्कालाई उनको छोरीको नाम अनुवी राख्न सुझाव दिएका छन् । उनले लेखे, विराट कोहली तपाई र छोरीलाई भगवानले रक्षा गर्नेछन् । यदि मैले एउटा नाम सुझाव गर्नु पर्छ भने यो राम्रो हुन्छ। यसको अर्थ जाँच गर्नुहोस्। यो एकदम सुन्दर नाम हो।
एक प्रयोगकर्ताले यो लेखे कि टीम स्पिरिटले विराट र अनुष्काको बालिकाको नाम सिड्नी हुनुपर्दछ। हो, अनुमा र अश्विनी नाम पनि विचार गर्न सकिन्छ।
एक प्रयोगकर्ताले सोशल मीडियामा ठट्टा गर्दै लेखेका थिए-यदि विरुष्काले आफ्नो छोरीको नाम विरुष्का राखे भने निरु यस प्यारा जोडीलाई मेरो शुभकामना।
‘मेरो दोस्रो विवाहलाई समाजले कसरी हेर्ला’ भन्दै श्वेताले गरेको प्रश्नमा करिश्माले दिइन् यस्तो मनछुने जवाफ